Choputa Uhie Red Light a ma ama nke Amsterdam | Akụkọ Njem
La gaa na Red Light District na Amsterdam ọ bụ iwu na anyị ga-aga obodo. Ọ bụghị n’ezie njem nleta iji mee dị ka ezinụlọ, ebe ọ bụ na nke a bụ mpaghara kachasị ama ama n’ụwa niile maka ịgba akwụna iwu kwadoro. Ọ dị na etiti obodo ahụ ma na-anabata ọtụtụ puku ndị njem nleta kwa afọ, ma ndị chọrọ ịmata ihe na ndị chọrọ ịnwale ọrụ enyere.
Anyị na-aga ga-esi mara obere mma ka ama ama Red Light District nke Amsterdam, nke bu ihe itu anya na otu ihe ha si eme ka iwu buru oru dika mgbe ochie ma obu ihe nlere dika igba nwanyi. Ma agbata obi a dị ọtụtụ karịa, ebe ọ bụ na ha na-eme njem nleta, enwekwara ebe ntụrụndụ ndị ọzọ.
1 Akụkọ banyere Mpaghara Uhie Uhie
2 Ebee ka ọ dị
3 Ihe ị ga-ahụ na Mpaghara Uhie Uhie
4 Nleta ndị ọzọ dị nso
Akụkọ banyere Mpaghara Uhie Uhie
Iji banye na Red Light District dị ka amaara taa, yana iwu dị ugbu a gbasara ịgba akwụna, emeela ọtụtụ agba. Ugbua n'afọ 1413 kwupụtara ụkpụrụ na-ekwupụta ndị akwụna dị mkpa na nnukwu obodo, na-anabata ụdị ọrụ a n'ihu ọha. Na 1810, na mbuso agha ndị France, ọ gara n'ihu, ebe ọ bụ na ruo mgbe ahụ ka a nabatara ịgba akwụna mana enweghị iwu ma ọ bụ achịkwa ya. Site na mbuso agha ndị France, emepụtara iwu nke nyere ndị ọrụ niile ụdị a iwu ka ha debanye aha ha na ndị uwe ojii wee lelee ahụike ha.
Ka oge na-aga, ụlọ ndị akwụna malitere ịpụta nke, n'ụzọ, enwere ike irigbu ndị ọrụ, yabụ ịgba akwụna kpatara ọjụjụ ụfọdụ. N'afọ A machibidoro brothels 1911 ọ bụ ezie na ndị akwụna nwere ike ịrụ ọrụ ha na-emegwaraghị site na steeti. Emere nke a naanị ka ọ kwụsị ndị na-erigbu ndị ọrụ ahụ maka uru ha. Nke a mere ka ndị ọrụ tinye uche na mpaghara ụfọdụ, na-ebi na ha, nke ga-abụ mmalite nke Mpaghara Uhie Uhie. N'ime afọ iri isii na asaa, agbataobi ama ama ama maka ndị ọrụ ya na nnwere onwe inwe mmekọahụ. Na 2000, e kagburu iwu machibidoro ụmụ nwanyị akwụna, mana na nloghachi ha ga-enwerịrị ịdị ọcha na njikwa iwu, iji zere nrigbu na-akwadoghị.
Ebee ka ọ dị
Obodo a ma ama dị n'ime obodo Amsterdam. Ọ dị n'akụkụ aka ekpe nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè. A makwaara ya dị ka Red Light ma ọ bụ Rosse Buurt. O nwere mpaghara atọ, De Wallen, Ruysdaelkade na Singelgebied. Ọ bụ na mpaghara kacha ochie n’obodo ahụ, ebe enwere n’oge gara aga ụlọ ndị ọ na-akụ azụ nke dị na nnukwu dike emere iji chebe obodo ahụ site na ebili mmiri. Ndị agbata obi ahụ mara Dam Square na Damrak Street.
Ihe ị ga-ahụ na Mpaghara Uhie Uhie
O doro anya na isi ihe na-adọrọ mmasị ndị njem na mpaghara a ụlọ ndị akwụna na ụlọ ebe a na-egosi ndị akwụna iji nweta ndị ahịa kwa ụbọchị. A na-atụ aro ka ị hụ agbata obi n'abalị, ebe ọ bụ na n'ehihie ọtụtụ n'ime windo ụlọ ahịa ndị a ma ama na-emechi, ebe ọ bụ na enweghị ọtụtụ ndị ahịa. N'abalị Red Light District na-ebi ndụ dị ka aha ya ma jupụta na ọkụ neon na-akpọsa brothels, agba na ọkụ na windo emeghe iji gosi ndị ọrụ.
Taa agbataobi a bụ ebe ejiji, ọ bụ ezie na ọtụtụ iri afọ gara aga, ọ nabataghị ya. Ọ bụghị ebe dị egwu ma ọlị Naanị ị ga-akpachara anya na ndị na-eji akpa ego na-erigbu ọtụtụ ndị njem nleta iji zuo ohi, mana nke a bụ ihe na-eme n'obodo ọ bụla buru ibu.
Na agbata obi a, ị nwekwara ike chọta ụlọ ahịa kọfị a ma ama ebe ị ga-a smokeụ sịga na ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ụlọ mmanya na-a aụ ihe ọ atụ drinkụ n'abalị na a na; Ọ na-adịkarị ịchọta Sexlọ Ahịa Mmekọahụ, nke bụbu akụkụ nke onyinye ndị njem nleta na agbata obi.
A ghaghị iburu n'uche na mpaghara a enweghị ike ịse foto ma ọ bụ see ndị akwụna, ihe a na-ejikarị akpọrọ ihe. Ọzọkwa, ịkwanyere ha ùgwù bụ ihe a na-ekwesịghị ime. N'aka nke ọzọ, ị gaghị azụta ihe ọ bụla n'aka ndị nkesa na mpaghara ahụ, n'ihi na ọ bụ iwu na-akwadoghị ma anyị nwere ike ịdaba na nsogbu.
Nleta ndị ọzọ dị nso
Mpaghara Uhie Uhie bụ ebe etiti dị mkpa, n'ihi ya, anyị nwere ike ịkwụsị mgbe anyị gachara ebe ndị ọzọ dị nso. .B. na-eje ije anya bụ Oude Kerk ụka, nke emere na narị afọ nke iri na anọ. Ọ bụ ụlọ kacha ochie n’obodo ahụ, ọ dịkwa n’ime Mpaghara Uhie Uhie. N'ihi otu ihe na-emegharị ahụ, akụkụ ya ahapụghị ịchọ mma ọ bụ ya mere ọ dị ezigbo mma. Ihuenyo ndị nwere ntụpọ na nnukwu akụkụ ahụ pụta.
N’ebe dịpụrụ adịpụ dịkwa ka Amstelkring Museum, otu n’ime ndị kacha ochie, n’ime ya bụ ụlọ ụka nke zoro ezo n’oge ya. N’akụkụ agbataobi ahụ bụkwa fama ama Square Square ma ọ bụ Rembrandt Museum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Amsterdam » Amsterdam Red Light District
Oge izu ụka na Milan, ụgbọ elu gbakwunyere ụlọ nkwari akụ